တရုတ်စက်မှု Valve, စက်မှုအနားကွပ်အမျိုးအစား Valve, ဆော့ဖထိုင်ဂိတ် Valve ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
စက်မှု valve,စက်မှုအနားကွပ်အမျိုးအစား Valve ,soft ထိုင်ဂိတ် Valve,soft ချိတ်ပိတ် Butterfly က Valve,,
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: စက်မှု valve,စက်မှုအနားကွပ်အမျိုးအစား Valve ,soft ထိုင်ဂိတ် Valve,soft ချိတ်ပိတ် Butterfly က Valve,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှု valve
စက်မှု valve ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, စက်မှု valve, စက်မှုအနားကွပ်အမျိုးအစား Valve ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, soft ထိုင်ဂိတ် Valve R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံ စက်မှု valve ပေးသွင်း
ပင်စည်ကျဇယားသံပျော့တံဆိပျကိုတံခါးဝအဆို့ရှင်မြင့်တက် ANSI / BS / Din မဟုတ်သော:
နည်းလမ်းကြိတ် 2. သာမန်သပ် type ကိုတံခါးဝအဆို့ရှင်, ကြေးနီလက်စွပ်ပစ္စည်း, fixed mode ကို, ရှင်းပြသင့်သည်,
3. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဓာတုနှင့်ပျော့ပျောင်းသောတံဆိပ်ခတ်တံခါးဝအဆို့ရှင်နှင့်အဆို့ရှင်ပန်းကန်နံရံပစ္စည်းများကျန်းမာရေးနှင့်မကိုက်ညီသောစမ်းသပ်ခြင်းဒေတာ;
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအဆို့ရှင်၏အမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျနော်တို့အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲစျေးနှုန်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: စက်မှု valve , စက်မှုအနားကွပ်အမျိုးအစား Valve , soft ထိုင်ဂိတ် Valve , soft ချိတ်ပိတ် Butterfly က Valve , စက်မှု Rotary Valve